Ogaden News Agency (ONA) – Offenbach, Germany – Xadagudubyada uu Gumeysiga Itoobiya ka wado Geeska Afrika
Offenbach, Germany – Xadagudubyada uu Gumeysiga Itoobiya ka wado Geeska Afrika
Posted by ONA Admin	/ September 25, 2011
Waxaa lagu wargalinayaa dadwaynaha S.Ogaadeeniya iyo guuda ahaan Jaaliyadda Somaliweyn ee ku nool dalka Germanyb gaar ahaan gobolka Hessen iyo agagaarka Frankfurt in 15.10.2011 lagu qaban doono Magaalada Offenbach wadada Frankfurter-Street, 86, 65067 Offenbach a/m, Shirkii sanadlaha ahaa ee looga hadli jirey dhibaatooyinka ka jira Geeska Afrika ee Gumeysiga Itoobiya uu horseedka ka yahey.
Shirka waxaa wadajir u qabanaya Jaaliyadaha kala ah:
1-Ogaden Community in Germany
2-Oromo Community in Germany
3-Eritrean Community in Germany
Xiliga Shirka la qabanayo waa maalinta kor ku xusan 15ka Bisha Oktoobar oo Sabti ah Saacadu markey tahey 12-ka Duhurnimo ilaa 24ka ama 6-da Habeenka Aaxada ah.
Shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhibaatooyinka uu gumaysiga Itobiya ka wado Geeska Afrika iyo xog badan oo quseeya shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika iyo waxyaaba kale oo idin xiisa galin doona.
Waxaa shirka gudoominaya Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Germany sidaa awgeed, faahfaahin dheeraad ah qofkii u baahda hakala soo xidhiidho maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya ee Germany Tel: 015221504608, Magaalada Offenbach, Germany.
Cabdiraxman Adam says:
a/ salamu caleykum
waxaan salaan sharaf u soo gudbinayaa kuwa mar kasta u heegan in ay xaqa u hiilayaan garabna u noqdaan shucuubtooda cadawga xaqiirka ahi sida foosha xun ugu xoog sheeganayo, isaga oon haba yaraatee waxba xeerinaynin.
Wuxuu adeegsanayaa cadawgu askartiisa iyo kuwo akhlaaqdii ka dhimatay oo sheeganaya in ay gobolka u dhasheen , ilaahay cidhibtooda ha baa’biiyo amin.
Waxaan cadawgaa xaqiirka ah kaga guuleysanaynaa in ay shucuubta dulman oo dhan u midawdo dhana kawada noqdaan, shucuubta dhexdoodana ka jiro iskaashi xaqiiqa ah iyo isu hiilin joogta ah.
ugu danbayntii, qof kasta waajib baa ka saaran in uu dhiciisa buuxiyo , jiilka soo socdana dhaxal wanaagsan uga toto.
waxaa sharaf mudan shacabka gumaysiga neceb ee somalida ogadenia gude iyo dibad meel uu joogaba jwxo guuuuuuuuuuuuuulllllll